हस्तमैथुन किशोरावस्थामा हुने आम यौन व्यवहार हो । यद्धपी कतिपयमा यो व्यवहार पाको उमेरसम्म रहने गर्दछ । आफ्नो यौन उत्तेजना शान्त पार्ने सशक्त, सुरक्षीत र गतिलो माध्यम भएकोले अधिकांश महिला तथा पुरुषले यो व्यवहार रोज्ने गर्दछन् । त्यसो त सन्तुलित हस्तमैथुनले शारीरिक तथा मानसिक फाईदा हुने बताइन्छ । तर लत बसिसकेका कतिपयले...
कपालमा नियमित तेल लगाउदा हुने यी ८ फाइदा
एजेन्सी । हामी प्राय: कहिले-काही मात्र कपालमा तेल लाउने गर्दछौ तर नियमित तेल लाउनु निकै राम्रो हुन्छ। नियमित तेल लगाउनाले के-के फाइदा हुन्छ जान्नुहोस। फाइदाहरु: १. कपालमा नियमित रुपमा तेलले मसाज गर्नाले कपालको जरा बलियो बनाउनुका साथै कपाल लामो र सुन्दर हुन्छ । त्यसैले आजैबाट कपालमा तेल लगाउन सुरु गर्नुहोस् । २. दिनहुँ कपालमा तेल...
सावधान ! खाना खाएलगत्तै नगर्नुस् यी काम
स्वस्थ रहनका लागि केवल राम्रो खानपान मात्र पर्याप्त हुँदैन । खानापछि हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपनि जरुरी हुन्छ । खानुको पूरा फाइदा हामीलाई तब मिल्छ, जब पाचन सही तरिकाले हुन्छ र खानाका सबै पोषक तत्व हाम्रो सरीरले लिन सक्दछ ।अधिकांस मानिसहरु खाना खाइसकेपछि जान अन्जानमा यस्ता काम गर्छन् जसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर...
गुणकारी अमलाका ७ फाइदा
अमला प्रकृतिले निःशुल्क उपहार दिएको बहुगुणी फल हो । अमलामा प्रसस्त मात्रामा भिटामिन सी पाईन्छ । अमला खानाले आँखाको रोशनी बढ्नुका साथै बच्चाको झाडापखाला समेत निको पार्छ । आयुर्वेदिक दृष्टिकोणले पनि अमलाको अति नै महत्व छ । अमलामा रहेको तत्वले दिमाग तेज बनाउँछ । त्यसैगरी छालाको समस्याबाट दूर राख्छ । यसका अलावा अमलाको अन्य धेरै फाइदाहरु...
किन खानुपर्छ काजु ? जानौ काजुको नौ फाइदा !
बढी मूल्य पर्ने काजुका फाइदा पनि मूल्यवान नै छन् । काजु खानुका केही फाइदा यस्ता छन्ः थकान हटाउँछ काजुलाई ऊर्जाको राम्रो स्रोत मानिन्छ । केही काम नगर्दा पनि थकान महसुस हुन्छ अथवा काम गर्ने मुड बन्दैन भने काजु खानाले तपाईंको शरीरमा ऊर्जा थपिनगई फुर्ती आउँछ । अनुहार चम्किलो बनाउँछ काजुमा प्रोटिनको मात्रा उच्च हुन्छ । त्यही भएर काजु खाने...
गर्मीमा स्वास्थ्यमा कसरी ध्यान दिने ?
गर्मीमा पसिना बढी आउँछ । त्यही भएर शरीरमा पानीको मात्रा कम नहोस् भन्नका लागि झोल पदार्थ प्रशस्त खानुपर्छ । पानी पर्याप्त खाइएन भने स्वास्थ्य खराब त हुन्छ नै, छाला पनि फुस्रो र फुंग उडेजस्तो हुन्छ । – पानीको ‘इन्टेक’ बढाउने अनेक तरिका छन् । पानी खाइरहन मन लाग्दैन भने जुस, दही, लसी, कागतीपानी, सर्बत, नरिवलको पानी, तरकारी तथा...
छाला चाउरिन नदिन खानुपर्ने फलफूल
वृद्ध हुनु प्राकृतिक नियम हो । उमेर बढेसँगै अनुहारको छालापनि चाउरी पर्छ र तन्किन सुरु गर्छ । तर उमेर नपुग्दै छाला चाउरियो भने के गर्ने ? हो युवा अवस्थामा नै छाला चाउरी पर्न थाल्यो भने अनावश्यक र महंगो क्रिम र लोसनको सट्टा प्राकृतिक रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। यसका लागि फलफूलमा विशेष जोड दिनुपर्छ । सर्बसुलभ रुपमा पाइने पाँच प्रकारका फलफूल जसले...
विवाह हुनुपूर्व सेक्स सम्बन्ध रहेको नरहेको कसरी थाहा पाउने ?
महिलाले विवाहअगाडि यौनसम्पर्क राखे/नराखेको कुरा थाहा पाउन सामान्य मान्छेले पहिलो यौन सम्पर्कको बेला रगत आए/नआएको वा दुखे/नदुखेको कुरालाई आधार मानेर हेर्ने, सोच्ने र बुझ्ने गरेको पाइन्छ । अर्कातिर पुरुषमा लिंगको अगाडिको छाला फाटे/नफाटेको, पछाडिसम्म खुले/नखुलेको आधारमा यौनसम्पर्क भए/नभएको आधारमा मूल्यांकन गर्ने गरिएको पाइन्छ । माथि...
किन गर्नैपर्छ योगा ?
–प्रकाश आचार्य, योग विषेशज्ञ मानिसले निश्चय नै आफूलाई सधैँ स्वस्थ राख्न चाहन्छ । तर, जति कोसिस गरे पनि रोगले शरीरलाई छाड्ने होइन । कताबाट रोग आइलाग्छ पत्तै हुँदैन । स्वस्थ्य रहनका लागि मानिस बिहानबिहानै दौडिन्छन्, जिम लान्छन्, जिउ मर्काइमर्काई ‘डान्स’ गर्छन् तै पनि भनेजस्तो हुँदैन । एरोबिक, ब्याडमिन्टन, कराँतेजस्ता खेल पनि...